जानौ शिव पुजामा 'बम बम भोले' शब्दको महत्व ! -
२०७६, ९ भाद्र सोमबार ००:२५ August 26, 2019 clickonLeaveaComment on जानौ शिव पुजामा ‘बम बम भोले’ शब्दको महत्व !
सोमवार शिव पुजाको महत्व
सोमबार को दिन शिव जि को पुजाको बिशेस महत्व हुन्छ त्यसोत कुनै बार मा पनि शिव जि को पुजा गर्न सकिन्छ। बिहानै उठेर स्नान आदि गरेर सेतो बस्त्र धारण गरेर शिव जि को पुजा गर्नु पर्द्छ। शिव जि को पुजा बिहान पुर्ब दिशा तर्फ मुख गरेर गर्नु पर्दछ। साझ को पुजा भने पस्चिम तर्फ मुख गरेर गर्नु पर्दछ । रात्रिमा शिव जि को पुजा उत्तर तर्फ मुख गरेर गर्नु पर्दछ।
शिव पुजाको संकल्प
शिव पुजा गर्दा सर्बप्रथम संकल्प लिनु जरुरी हुन्छ। सकल्प गर्नु अगाडी हाथमा जल, फुल,चामल लिऔ। संकल्प मा जुन दिन को पुजा गरिन्छ त्यस बर्स,बार, तिथि ठाउ र आफ्नो नम लिएर आफ्नो चिताएको कुरा को स्मरण गरौ। त्यसपश्चात हाथमा लिएको जललाइ जमिनमा छोडीदिउ। शिव पुजा बिधि सोमबारको दिन बिहान उठेर स्नान गरी सिव मन्दिर गएर शुद्ध जलले शिवलिंग को अभिषेक गरी निम्‍नलिखित मंत्र्को जाप गर्ने ऊं महाशिवाय सोमाय नम:।
त्यसपश्चात गाईको काचो दुध शिवलिंगमा चडाउने यसले तन, मन, धन संग सम्बन्धित समस्या दुर् हुन्छ। त्यसपश्चात शिवलिंग मा मह तथा उखुको रस चडाउने यसले नौकरी या व्यवसाय बाट हुने समस्या दुर गर्छ। अब कपूर, गंध,फुल,धतुरो र भस्मले शिवजी लाई अभिषेक गरौ। अंतमा आरति गरौ र मन बाट मनोकामना पूर्ति को कामना गरौ। सोमवारमा शिवलिंगको पूजा अर्चना गरीसकेपाछि कुशको आसनमा बसेर रुद्राक्ष माला द्वरा शिवको मन्त्रको जाप गरेमा विलक्षण सिद्धि तथा मन को ईच्छा पुरा हुन्छ।
शिव जि को प्रिय शब्द
शिव जी लाई औघड़ दानी या भोले भंडारी पनि भनिन्छ। भक्‍तहरुले शिव जि लाइ जुनै तरिकाले पुजा गरे पनि शिव जि प्रसन्न हुनुहुन्छ । शिव लाइ एक लोटा जल, एक बिल्‍व पत्र र अक्षत दिएर मात्र शिव जि लाइ प्रसन्न गर्न सकिन्छ परंतु यद‍ि पूजा पश्चात शिव जि लाइ तीन चोटि श्रद्धा पूर्वक बम-बम को उच्चारणको साथ याद गरेमा शंकर जी लाइ अपार प्रसन्‍नता हुन्छ।। त्यसैले सोमवारको दिन र जब तपाइ शिव जी को पूजा गर्नुहुन्छ बम् बम् भोले भन्न नबिर्सनुहोस्।
चर्चित सुन्दर अनुहार कि धनी र कुशल ब्यक्तित्व कि धनी रोजिशा
२०७५, १ भाद्र शुक्रबार १५:५७ August 17, 2018 clickon
आजदेखि राजधानी मा नेपाली काङ्ग्रेसले सङ्घीयता अनुसार पार्टीको विधानलाई परिमार्जन गर्न बोलाएको महासमिति बैठक शुरु
२०७५, २८ मंसिर शुक्रबार १४:२३ December 14, 2018 clickon